Musha - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Imwe yebhizimusi yezvivakwa indasitiri inokwikwidza zvakanyanya zvine chekuita nesarudzo dzevatengi vavo. NewGenApps inopa akachinjika ewebhu dhizaini uye nzira dzekutengesa dzinozokugadzika iwe mukati mekutengesa kwako. Chikwata chedu chinotakura zvivakwa dandemutande budiriro ruzivo uye hunyanzvi hwekugadzira matsva mawebhusaiti. Isu tinotarisa pamabatiro, usability uye zvemukati zvekuchengetedza iwe kirasi wakaparadzaniswa. Isu tinogadzira 100% yakagadziriswa mawebhusaiti emidziyo yese (nhare, mapiritsi, nezvimwewo) izvo zvinosanganisira zvakakwana content management system (CMS). Izvi zvinobvumidza kusununguka kwauri kuti uwedzere / kugadzirisa data chero nguva.
Isu tinopawo iwo anoshandisika zvikuru Anogona uye AWS masevhisi. NewGenApps yakashanda nesimba kusimbisa seti yezvipiriso zvinobatsira vese vamiririri nevashambadzi kuchengetedza hupo hwewebhu hunoshanda.
Nesimba rakasimba rehunyanzvi uye kugona kunzwisisa zvinodiwa nevatengi, isu tinovavarira kupa yekupedzisira-kumagumo sevhisi yezvivakwa neyakanaka musanganiswa wehunyanzvi kutyaira zvakanyanya purofiti.
Maitiro edu akaoneswa echikamu cheReal Estate
1. Tsika Webhusaiti dhizaini
2. Inoteerera Webhu Kuvandudza
3. Zvemukati Management Maitiro
4. Kubata, kutsigira uye kugadzirisa
5. Kushandiswa kweWordPress, imwe yeanonyanya kufarirwa chikuva chekuvaka zvivakwa
6. Mawebhusaiti nemablog
7. SEO inoshamwaridzika
8.Tungamira Chizvarwa kuburikidza neGiravhiti Mafomu
9. Mazuva ose Backups
10.Kupa mepu uchishandisa maturusi akaita seMepPress, nzira inonyanya kuzivikanwa uye yakapusa kugadzira mepu dzeGoogle dzakarongeka
12. Google Analytics yeWebhusaiti vashanyi Statistics